Vizrt pivots mankany Flexible Access | NAB Show News | 2021 NAB Asehoy ny mpiara-miasa amin'ny Media sy ny mpamokatra ny Kat Show LIVE. Vaovao momba ny haino aman-jery
Home » Content Creation » Vizrt pivots mankany amin'ny fidirana mora
Fanitsiana feno ny VizrtFanolorana ny vokatra hamaly ny fitaky ny tontolon'ny haino aman-jery ankehitriny
Vizrt, mpamatsy laza lehibe indrindra eran-tany ny fitaovana fanaovana tantara an-tsary nofaritana rindrambaiko (#SDVS) ho an'ny mpamorona atiny media, nanambara androany Flexible Access. Amin'ny alàlan'ny Flexible Access, Vizrt mizara ny risika ateraky ny fananganana na fanatsarana ny fahaizan'ny famokarana mialoha ny famokarana lanja.
Michael Hallén, CEO ary filoha ho an'ny Vizrt Nilaza ny vondrona, “Flexible Access dia mametraka ny fahombiazan'ny mpanjifantsika ho ivon'ny fifandraisanay, manome azy ireo hahay handanjalanja mifanaraka amin'ny filan'ny orinasa miova haingana. Manome fifehezana lehibe kokoa ny vidin'ny fiasan'izy ireo, mampidina ny sakana tsy hidirana ary manafaingana ny fiverenan'izy ireo amin'ny fampiasam-bola. Ny vaovao Vizrt Ny vahaolana Suites dia manamora ny fidiranay ary mifanaraka amin'ny valin'ny mpanjifa tena izy, manome ny mpanjifanay lalana haingana kokoa sy azo antoka kokoa. ”
Miaraka amin'ny Flexible Access, modely faktiora miverimberina, dimy vaovao Vizrt Solution Suites dia manome fomba vaovao sy tsotra notsorina ny mpanjifa mba hampifanaraka ny fitaovan'ny rindrambaiko famokarana atiny sy hampivoatra sy hidina hahatratra ny filan'ny famokarana miova hainganas. Izany dia manome Vizrt fidiran'ny mpanjifa amin'ny tontolo iainana manankarena indrindra amin'ny fitaovana fanaovana tantara an-tsary nofaritana rindrambaiko mba hahatanteraka ny vokatra ara-barotra haingana kokoa nefa hisorohana ny filan'ny fampiasam-bola mihoapampana.
Ny drafitra Flexible Access dia hatolotra manaraka Vizrt Solution Suites:
Vizrt Fanaraha-maso ny famokarana
Vizrt Famantarana ny fantsona
Famolavolana famokarana, fanalefahana ara-bola
Tsy misy mpamokatra atiny afaka maminavina ny fomba hiovan'ny maodelim-pandraharahana, na ny toerana tokony hampiasain'izy ireo hamatsy vola amin'ny filan'ny famokarana ho avy sy ny fidiram-bola. Mba hijanonana ho manan-danja hatrany dia mila mamokatra atiny voatsara kokoa izy ireo ho an'ny endrika haino aman-jery maro. Miaraka amin'ny Flexible Access, ny mpamokatra haino aman-jery dia tsy mandoa afa-tsy izay ilainy ary afaka manalehibe ny fidiran'izy ireo arakaraka ny isan'ny mpanao gazety mila fitaovana mamorona, firy ny vokatra azo avy amin'ny studio, firy ireo fakantsary voahitsakitsaka manome zava-misy marobe, sns.
Vizrt Flexible Access Solution Suites dia misy avy hatrany amin'ny $ 1,795 USD isam-bolana. Mifandraisa azafady ny Vizrt manam-pahaizana momba ny varotra raha mila fanazavana fanampiny.
Previous: KRK Miarahaba Generation Subwoofer Vaovao
Next: Ross Video dia misafidy karatra Matrox SMPTE ST 2110 NIC hampandeha ny maotera XPression Graphics